Nzuzo Nrụpụta: Nkà na ụzụ abụghị teknụzụ mgbe niile | Martech Zone
Ekwesịrị m ikweta, mkpụrụ akwụkwọ anọ ahụ TECH nyere m ndị na-ama jijiji. Okwu a bu “uzu uzu” bu okwu na-atu ujo. Mgbe obula anyi nuru ya, anyi kwesiri itu egwu ma obu obi uto. Adịkarịghị anyị na-elekwasị anya na nzube nke teknụzụ: na-ewepụta ihe mgbagwoju anya n'ụzọ ka anyị nwee ike imekwu ihe ma nwekwuo ọ .ụ.
Naanị Teknụzụ Ozi
Ọ bụ ezie na okwu teknụzụ sitere n'okwu Grik téchnē, nke pụtara “ọrụ aka,” ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ya ugbu a ozi teknụzụ. Ndị na-agụ akwụkwọ nke The Martech Zone na-abanye n'ọtụtụ obodo nke mpaghara a. Anyị na-amagharị gburugburu acronyms dị ka URL, SEO, VoIP na PPC. Anyị na-eme ka atụnyere sara mbara n'etiti ngwaahịa, ọrụ na ọrụ dị iche iche nke yiri ka enweghị njikọ. Worldwa nke teknụzụ jupụtara n'ọtụtụ okwu na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịghọta ihe ndị mmadụ na-ekwu na nzukọ. Asị na ị banyela “teknụzụ” nwere ike imenye ụfọdụ ụjọ.
N'etiti Teknụzụ na Nka na ụzụ
Enwere ụwa dị iche na teknụzụ na teknụzụ. Teknụzụ bụ ngwa bara uru nke echiche sayensị iji mepụta nsonaazụ bara uru ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Teknụzụ bụ ọtụtụ nkọwa na-eme ka teknụzụ na-arụ ọrụ. Iji dokwuo anya: Ọ dị mkpa na onye maara otu esi achọpụta nsogbu injin dị n'ụgbọ ala gị, mana iji nwee ọ technologyụ na teknụzụ ụgbọ ala ịkwesighi ịbụ onye na-arụ ụgbọ.
Ya mere gịnị na-eme? Nke a bụ echiche m:
Amaghị nke ọma
Na mbido, onweghị onye n’ime anyị ma ihe ọ ga - apụta ọzọ. Ma otu ụbọchị, BAM, ị nụrụ na Google, Food Network na International Olympic Committee na-esonye n'ike iji mepụta netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta n'ịntanetị maka ịsọ mpi arugula.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, anyị anaghị azụta ihe ozugbo. N'ezie? Kedu ihe m ga-eji ngwaọrụ na enweghị keyboard? Anyị na-ajụ onwe anyị, gịnị kpatara m ji chọọ igwe na-eji asụsụ mmadụ arụ iji zipu ozi ederede n’aha m?
Ajụjụ ndị a, Otú ọ dị, chọrọ ntakịrị nkà na ụzụ. Anyị ga-eji anya nke uche hụ onwe anyị site na iji teknụzụ ọhụụ, ma nwee nghọta maka otu esi arụ ọrụ na ndụ anyị.
Nchọpụta ma ọ bụ Egwu
Ka teknụzụ na-agbasawanye, anyị gafere ndụdụ n'okporo ụzọ. Ma anyị nwere ike weta ya na nchapu nke nchoputa (Oh! Enwere m ike iso ndị enyi ochie na Facebook. Jụụ!) ma ọ bụ na ọ dịghị mgbe ọ na-abanye n'uche anyị. Teknụzụ na-amalite ịgabiga anyị, anyị na-atụkwa ụjọ na anyị "enweghị amamihe zuru oke" maka ụwa gbara anyị gburugburu.
(Achọpụtaghị ya: teknụzụ anyị nwetara mana achọghị ịma. Dịka ọmụmaatụ, ngwa iPhone nke na-eme mkpọtụ anụ ahụ na-eme ihere.)
Kporora ka Ọkachamara
Mgbe ụfọdụ anyị na-amata nke ọma na teknụzụ ọhụụ nke teknụzụ ọhụụ, anyị na-achọ iwepụ ya ma gosipụta ike anyị. Ka m na-ede post a maka The Martech Zone, M ga-esi na-eme ya na raw HTML ma gbakwunye akara ngosi akara aka m. Teknụzụ na-aga were were fun, n'ihi na m bụ ezigbo ọkachamara na-eme otú ahụ.
Mgbe ụfọdụ anyị na-eru eru na teknụzụ, na-aghọta ihe zuru ezu iji mara otu esi aga. May nwere ike ghara ịghọta n'ezie otú a ihuenyo mmetụ na-arụ ọrụ, ma na a obere omume na nkasi obi i nwere ike inwe tinyere iji ya dị nnọọ mma.
Mgbe ụfọdụ, teknụzụ na-eyi ihe mgbagwoju anya ma na-agafe anyị. Nke a bụ nsogbu kachasị ọnọdụ niile, n'ihi na ọ siri ike inyere mmadụ aka ịmata na ọ bụrụ naanị na ha ghọtara ntakịrị nkọwa nkọwapụta (dịka ọdịiche dị n'etiti igbe ọchụchọ na adreesị adreesị), ha ga-aka mma.
Ihe Ị Pụrụ Ime
Mara na onye ọ bụla ị zutere nọ n'ebe ụfọdụ na teknụzụ Cognition Chart maka ụdị gizmo, usoro ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
Nyere ha aka ịkwaga ebe ha chọrọ ịkwaga (iru eru ma ọ bụ nka), ọ bụghị nke i choro.
Chepụta teknụzụ na mgbasa ozi ahịa na ọrụ ọ bụla n'uche. Ndi ahia ebe ha no, obughi ebe i chere ha kwesiri!
Kedu ihe ị chere? Ndị mmadụ na-ebi n'okporo ụzọ egosipụtara na teknụzụ Cognition Chart?
Tags: ịmụtaụtọikemmerichọpụtaraọkachamaraegwuamaghịarụpụtaghịenweghị obi abụọteknụzụcognisation teknụzụ